UNWTO General Assembly Morocco: E gosipụtabeghị ihe nzuzo?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » UNWTO General Assembly Morocco: E gosipụtabeghị ihe nzuzo?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Morocco • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism
SEGOVIA, SPAIN - Mach 26: A na -ahụ odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation, Zurab Pololikashvili na mmemme mmeghe nke WTO Forum na Machị 26, 2019 na Segovia, Spain. (Foto nke Nacho Valverde/Europa Press site na Getty Images)
UNWTO na -akwado maka ọgbakọ ọgbakọ nke iri abụọ na anọ na Morocco.
Ndị isi ihe ọmụma gwara eTurboNews, a na -eyigharịrị GA a, mana gịnị kpatara na odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili na -edebe nke a ka ọ bụrụ ihe nzuzo ruo ugbu a, na -agwaghị ndị otu UNWTO?
Asịrị sitere na isi mmalite amaara na -atụ aro onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili kpebiri na a ga -eyigharị 2021 2Nzukọ ọgbakọ nke anọ nke emere ugbu a maka Morocco.
Morrocco dị ka onye ọbịa nwere ọrụ kwesịrị inwe mmasị na ụbọchị ọhụrụ maka ihe omume UNWTO iji zere esemokwu na mmepe COVID-19.
Kedu ihe kpatara na -agwabeghị ndị otu UNWTO?
Mgbakọ UNWTO, nke e mere na ya Marrakech, ga-abụ ihe omume UN nke ọkwa ọkwa mba ụwa nke mbụ kemgbe COVID-19 tinyere ụwa mkpọchi. Nke a bụ ozi mba maka ụwa mgbe ahọpụtara odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvil na Jenụwarị afọ a.
N'oge ntuli aka nke ọnwa Jenụwarị na Zurab na Spain nwere ọdachi mba n'ihi ihu igwe jikọtara ya na mkpọchi n'ihi mmụba dị egwu n'okwu COVID.
Onye odeakwụkwọ ukwu abụọ nke UNWTO gara aga gbara Zurab ume ka o yigharịa ntuli aka na Jenụwarị maka nchekwa nke ndị na-aga ime, ikwe ka ndị nnọchianya bịa, na maka ndị ọzọ ịbanye na asọmpi ahụ.
Ọ dị ka nke a bụ nke ikpeazụ n'uche SG n'oge ahụ na-achọsi ike imeri ntuli aka ya n'iji nhazi oge, n'agbanyeghị na ọ na -akwanyere Bahrain ugwu.
N'ọnwa Febụwarị onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili duuru ndị nnọchi anya UNWTO wee gaa Morocco ka ha kpaa maka nkọwa nke nzukọ iwu na-abịanụ na-elekwasị anya na Mmụta na Ntorobịa, Mmepe ime obodo, na Innovation Dijitalụ, na Mgbakọ General.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Morocco Nadia Fettah Alaoui, sonyere ndị nnọchi anya njem nleta ụbọchị atọ ahụ, kwupụtara nkwa Morocco maka ịnabata “Mgbakọ Ezumezu”. O kwusikwara ike mkpa ọ dị ịtụteghachi njem nlegharị anya mba ofesi n'ụzọ dị nchebe ma na -adigide.
Onye Morocco ngalaba njem, nke tụfuru ijeri $ 4.77 (MAD 42.4 ijeri) na 2020 n'ihi mmachi njem metụtara COVID-19, na-achọ ụzọ iji nye obodo ahụ nkwalite akụ na ụba na ụwa mgbe ọrịa butere.
Morocco 37.5 nde.
Ugbu a, Morocco, mba dị na North Africa nọ n'ọkwa 124 n'ụwa n'ime ikpe COVID19. Morocco dị 110 na ọnwụ 251 kwa nde,
Na ntụnyere, Spain nwere ọkwa 38 n'okwu ikpe, yana 25 na ọnwụ.
Ọ bụrụ na ekwenyela yigharịrị ọgbakọ ọgbakọ, ọ ga -egosi Moroccos ezigbo nkwa maka njem nlegharị anya ụwa ma chekwaa ụwa a. Ọ na -egosikwa ntinye aka ịkekọrịta ọrụ nke iwughachi njem nlegharị anya na ụwa, ọ bụghịkwa naanị mmadụ ole na ole nwere ike ịga ọgbakọ ọgbakọ n'oge ugbu a.